Knowledge – The News Post
လက်သုံးချောင်း သင်္ကေတက ဘာလဲ” “ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ” တဲ့ ညာဘက် လက်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီး လက်သန်းနဲ့လက်မကို ဖိကပ်ထားရတဲ့ လက်သင်္ကေတဟာ ကင်းထောက်ဘဝရဲ့အမွန်အမြတ်တစ်ခုလိုပါပဲ။ ဒီသင်္ကေတဟာ ကင်းထောက် ကတိသုံးပါးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သင်္ကေတလည်း ဖြစ်သလို ဆာဘီးယားလူမျိုးတွေ ရဲ့ …
အပေါင်းအသင်းမက်ပေမယ့်လည်း ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေသား/ သမီးများအကြောင်း….
ချစ်​သူအ​ပေါ် အနိုင်​ယူ လိုတဲ့ စိတ် ​ရှိတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အလိုကျ အတိုင်း ဖြစ်​​စေချင်​တဲ့သူမျိုး။ အရမ်းလည်း ချစ်​တတ် ​ကြတယ် …။ တနင်္ဂ​နွေ​ သားသမီး​တွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်း​ပေမယ့် အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ …
5.11.2020 မှ 11.11.2020အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနြေ ယခုကာလများအတွင် မိန်းမနှင့် ပတ်သက်သော အရှုတ်အထွေးများ ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါသည်။ မျက်နှာမှာ လည်း မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရတတ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအကြံအစည်သစ်များ ပေါ်ပေါက် လုပ်ကိုင်ရ …
ငွေဝင်ဂါထာဟု ကျော်ကြားသော ဒိဝါတပတိ ဂါထာတော် သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာပါဠိတော် (၁) ဒိဝါ တပတိ အာဒိစ္စော ၊ ရတ္တိမာ ဘာတိ စန္ဒိမာ။ သန္နဒ္ဓေါ ခတ္တိယော တပတိ ဈာယီ တပတိ ဗြဟ္မဏော။ …
အိပ်မက်ကို လူတိုင်ြး မင်မက် ပါတယ်။ အိပ်တာ နဲ့ မက် တဲ့ အိပ်မက်မျိုးက သွေးလေချောက်ချားပြီး မက်တဲ့ အိပ်မက်၊ ရှေးယခင်က ခံစားဖူးတာ ကို အကြောင်းပြုပြီးမက်တဲ့ အိပ်မက်၊ နတ်ဆိုးနတ်ဝါးတွေ လှည့်စားလို့မက်တဲ့ အိပ်မက်ဆိုးရယ် …
မိဘ ကို လုပ်ကျွေး တဲ့ သားသမီးတိုင်း လက်တွေ့ ခံစားရ မည့် အကျိုး တရား (၁၂) ပါး.
သားသမီးတိုင်း မိဘကို လုပ်ကျွေးရန် အ ခွင့်အရေး (၅) ပါး ၁။ မိဘကို ကျွေးမွေး ပြုစုရန် မိမိ မှာ ဖြူစင်သော စေတနာ ရှိခြင်း။ ၂။ မိမ်ိမှာ ကျွေးမွေးနိုင်သော အင် …
October 28, 2020 By thu han soe Knowledge
မြွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရွှေမြန်မာတွေ ယုံကြ ည်နေကြတဲ့ အလွဲတချို့ (ရှေးလူကြီးတွေ ဂျင်းထည့်ခဲ့ပုံများ) မရှိတာထက် မသိတာခက် မသိတာထက် ပိုခက်တာက မသိရင် လေ့လာဖို့မစဉ်စားဘူး မလေ့လာချင်လည်း ငြိမ်မနေဘူး ကိုယ်စိတ်ထဲထင်ရာတွေ သောက်တစ်လွဲရှောက်ပြောကြတာပဲ မြွေတစ်ကောင်တွေ့ရင် ဂေါ်ဇီလာတွေ့သလို …
ကိုဗစ်ကြောင့် အနံ့ပျောက်ခြင်းသည် နှာခေါင်းပိ တ်ခြင်းကြောင့် အနံ့မရှူနိုင်ခြင်း မဟုတ်ပါ၊ အနံ့ခံသော အာရုံခံစနစ်၏ ပြသနာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်တွင် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း နှာဆေးခြင်းသည် အဖြစ်နည်းပါသည်။ ကိုဗစ်ကြောင့် အနံ့မရပါက လုံးဝအနံ့မရခြင်းဖြစ်နိုင်သလို အနံ့ခပ်ပျော့ပျော့များကိုသာ မရတော့ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ …
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများ အတွက် တစ် ပတ်စာ ဟောစာတမ်း များ (၂၅.၁၀.၂၀) မှ (၃၁.၁၀.၂၀) ရက်ေ န့အထိ
သင့်ရဲ့တစ်ပတ်စာကံကြ မ္မာကို ကြို တင်သိရှိပြီး ယတြာကောင်းတွေရယူနိင်ရန် အတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် (၂၅.၁၀.၂၀) မွ (၃၁.၁၀.၂၀) ရက်နေ့အထိ ခုနွစ်ရက်သားသမီးမ်ားအတြက် (၂၅.၁၀.၂၀) မြ (၃၁.၁၀.၂၀) ရက်နေ့အထိ သင့်ရဲ့တစ္ပတ္စာကံကြမ္မာကို ကြိုတင်သိရွိပြီး …